चितवनमा सल्किएको विद्यार्थी आन्दोलन :: अमित ढकाल :: Setopati
अमित ढकाल र मनोज सत्याल चितवन, भदौ ३०
नारायणगढस्थित चितवन मेडिकल कलेजमा पछिल्लो १४ दिन पढाइ ठप्प छ। विद्यार्थी दिनदिनै आन्दोलन गर्छन्।
सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क नतिर्ने र यसअघि कलेजले अवैधानिक रूपले लिएको पैसा फिर्ता वा समायोजन गर्नुपर्ने माग राखेर विद्यार्थीले आन्दोलन चर्काएपछि मेडिकल कलेज प्रशासनले सूचना जारी गरेर कलेज बन्द गरेको हो। प्रशासनले विद्यार्थीलाई होस्टेल छाड्न पनि सूचना निकालेको छ।
अहिले कलेजले कुनै पनि विद्यार्थीलाई कलेजको अस्पतालमा छिर्न दिएको छैन।
‘बिरामी विद्यार्थीलाई उपचार गर्न पनि अस्पतालभित्र छिर्न दिएनन्। अर्कै अस्पताल जानु भने,’ एमबिबिएस चौथो वर्षकी विद्यार्थी मान्यता थापाले भनिन्।
विद्यार्थीहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन्।
आइतबार पनि उनीहरूले मेडिकल कलेजको अस्पतालअघि कोण सभा गरे। आफ्ना माग पूरा नहुन्जेल आन्दोलन नरोक्ने बताए। झन्डै दुई घन्टा चलेको कोण सभामा झन्डै दुई दर्जन विद्यार्थीले आफ्ना कुरा राखेका थिए। कतिले कविता वाचनसमेत गरेका थिए।
सभामा बोल्ने विद्यार्थीले आफूहरू कुनै राजनीतिक दलसँग सम्वद्ध नभएको, कसैको उक्साहटमा त्यहाँ नआएको र विशुद्ध रूपमा कलेजले गरेको ‘शोषण’ विरूद्ध उभिएको बताएका थिए।
सभालाई सम्बोधन गर्दै विद्यार्थी अस्फाक खानले भने, ‘अब पनि हामीले परिवर्तन ल्याउन सकेनौं भने पछि आउने विद्यार्थीले पनि दु:ख पाउनेछन्। त्यसैले जबसम्म बेथिति हट्दैन, हामी लडिरहनेछौं।’
चितवन मेडिकल कलेजमा पढ्ने कैयौं विद्यार्थीले भर्ना हुँदा आफूहरूसँग कलेजले नेपाल सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको रसिद देखाए। कलेजले अझै पनि थप शुल्क मागिरहेको उनीहरूको दाबी छ।
ती रसिदका फोटोकपी सेतोपाटीसँग सुरक्षित छन्।
नेपाल सरकारले एमबिबिएस पढ्न निजी कलेजले एक जना विद्यार्थीबाट जम्मा ४२ लाख ५० हजार शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै नर्सिङ पढ्न सात लाख ४८ हजार रुपैयाँ तोकेको छ।
चितवन मेडिकल कलेजले भने एमबिबिएस पढ्न सरकारले तोकेभन्दा कम्तिमा १२ लाख र नर्सिङ पढ्न कम्तिमा चार लाख बढी माग्ने गरेको उनीहरूले बताए।
कलेजले एमबिबिएसका लागि सुरूमा भर्ना हुँदा नै थप छ लाख र नर्सिङमा थप एक लाख रुपैयाँ लिने गरेको छ। चितवन मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीहरूको सबैभन्दा ठूलो असन्तुष्टि कलेजले उठाउने यही अवैधानिक शुल्कलाई लिएर छ।
चितवन मेडिकल कलेजले एमबिबिएस पास गरेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप गर्दा दिने तलब पनि थप्नु पर्ने विद्यार्थीको माग छ।
कलेजले अहिले इन्टर्न गर्ने विद्यार्थीलाई मासिक १२ हजार रुपैयाँमात्र दिने गर्छ।
‘पढाउँदा ६० लाखसम्म लिने, काम गर्दा १२ हजार दिने र दैनिक १२ घन्टा काम लगाउने,’ एमबिबिएस पास गर्न लागेकी विद्यार्थी मान्यता थापाले भनिन्, ‘मेडिकल केलजहरूमा श्रमको साह्रै नै शोषण छ।’
अहिले आएर किन सल्कियो चितवनमा आन्दोलन?
चितवन मेडिकल कलेजमात्र होइन अहिले देशैभरिका मेडिकल कलेजहरूले सरकारले तोकेभन्दा धेरै शुल्क विद्यार्थीसँग उठाउँछन्। यस्तो अवैधानिक शुल्कविरूद्ध विद्यार्थीहरूले पटक-पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन्। कलेजहरूले ती आन्दोलनलाई कहिले प्रशासनको सहयोगले त कहिले अन्य तिकड्म प्रयोग गरेर दबाउँदै आएका छन्।
पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीहरूले कलेजले उठाउने अवैधानिक शुल्कविरूद्ध गत माघमा आन्दोलन छेडे। आन्दोलन ६१ दिनसम्म चल्यो।
त्यसपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले निजी कलेजका सञ्चालक र विद्यार्थीहरूलाई बोलाएर वार्ता गराए। वार्तामा सहमति निस्किएन। वार्तामा उपस्थित निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष बसरुद्दिन अन्सारी तथा चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालक हरिसचन्द्र न्यौपानेले सो विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले दिने निर्देशन आफूहरूलाई मान्य हुने बताए।
शिक्षा मन्त्रालयले २०७५ साल चैत १२ गते निजी कलेजहरूलाई सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको भए एक महिनाभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दियो। शुल्क फिर्ता भए/नभएको अनुगमन गर्न एक समिति बनाउने निर्णय गर्‍यो।
२०७५ साल चैत ८ गते शिक्षा मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौ विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिललाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारबाट तोकिएको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिएका गण्डकी मेडिकल कलेजलगायतका मेडिकल कलेजहरूले सम्बन्धित विद्यार्थीहरूलाई एक महिना भित्र शुल्क फिर्ता गर्ने। विश्व विद्यालयका प्रतिनिधि, कलेज सञ्चालक प्रतिनिधि, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले शुल्क फिर्ताको अनुगमन गर्ने।’
तर शिक्षा मन्त्रालयले दिएको निर्देशन पालना भएन।
‘न त मेडिकल कलेजहरूले पैसा फिर्ता गरे,’ गण्डकी मेडिकल कलेजमा त्यो बेला आन्दोलनको नेतृत्वपंक्तिमा रहेका अनित सिन्हाले सेतोपाटीसँग भने, ‘न त शिक्षा मन्त्रायलले अनुगमनका लागि बनाउने भनेको समिति नै बनायो।’
चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालक न्यौपानेलाई शिक्षा मन्त्रालयले दिएको निर्देशनअनुसार किन सरकारले तोकेको शुल्क भन्दा धेरै लिएको पैसा फिर्ता नगर्नुभएको हो भनेर सोध्दा उनले आफूले उक्त निर्देशन नपाएको बताए।
‘त्यो निर्देशन चितवन मेडिकल कलेकजमा आइपुगेको छैन,’ उनले भने।
तपाईंको कलेजले सरकारले तोकेभन्दा धेरै शुल्क किन लिएको भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘सरकारले तोकेको शैक्षिक शुल्कमात्रै हो। त्योभन्दा अन्य शुल्क तोकेर लिन पाइन्छ भनेर आइओएमले नै हामीलाई भनेको छ।’
शिक्षा मन्त्रालयले कलेजहरूले अन्य शुल्कका नाममा सरकारले तोकेभन्दा बढी लिएको यस्तै शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो। गण्डकी कलेजले पनि सरकारले तोकेको शैक्षिक शुल्कमात्र हो भन्दै थप शुल्क लगाएको थियो।
यसरी शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन नै पालना नभएपछि विद्यार्थीले फेरि पनि धोका पाए।
ठीक त्यहीबेला चितवन मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस चौथो वर्षको अध्ययन पूरा गरेर बसेका थिए, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’का छोरा प्रकाश। यो कलेजमा पनि अवैधानिक शुल्कको मुद्दा सुरूदेखि नै थियो। समय-समयमा विद्यार्थीहरूले त्यसविरूद्ध आवाज उठाएका थिए।
यो समस्याविरूद्ध विद्यार्थीहरूले देशव्यापी रूपमा आवाज उठाउनु पर्छ भन्दै उनले चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई सम्झाए।
‘कुनै एउटा कलेजलाई मात्र दोष दिएर यो समस्या समाधान हुन्न भन्नेमा म सुरूदेखि नै प्रष्ट थिएँ,’ चन्दले सेतोपाटीसँग भने, ‘देशभरिकै मेडिकल कलेजहरूका विद्यार्थीहरूलाई एकतावद्ध बनाएर हामीले संघर्ष गर्नुपर्छ भनेर मैले साथीहरूलाई सम्झाएँ।’
आफ्नो कलेजका धेरै विद्यार्थीलाई आफूसँग सहमत गराएपछि उनी अरू अन्य मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई भेट्न गए।
‘पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज, भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेज र जनकपुरको जानकी मेडिकल कलेज गएर विद्यार्थीहरूसँग कुरा गरें,’ उनले भने।
भदौ ४ गते काठमाडौ गएर चन्द र गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी अनित सिन्हाले महाराजगञ्जस्थित चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका स्ववियु सभापति मिलन गैरेलाई भेटे। उनीहरूले काठमाडौ विश्वविद्यालय मेडिकल कलेजका विद्यार्थी नेताहरू नरेश भट्ट र सुजन कडेरियालाई पनि भेटे।
मेडिकल साइन्स पढ्ने विद्यार्थीसँगको अन्तरक्रियापछि भदौ १२ गते उनीहरूले चन्द र गैरेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समिति गठन गरे।
शिक्षा मन्त्रालय, त्रिवि, नेशनल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डिनको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएर ७२ घन्टे अल्टिमेटम दिए।
चन्द चितवन फर्किएपछि विद्यार्थीहरूले सल्लाह गरेर भदौ १८ गते कलेजमा आमसभा राख्ने, प्रशासनलाई आफ्ना मागहरू बुझाउने कार्यक्रम तय भयो।
भदौ १६ गते चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका सदस्य तथा चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थी प्रवीण स्याङ्तानलाई प्रहरी लगाएर समात्यो।
विद्यार्थीले भदौ १७ देखि नै आन्दोलन सुरू गरे। हाम्रा जायज माग उठाउँदा स्याङ्तानलाई किन समातियो भनी विद्यार्थीले प्रहरी प्रशासनलाई प्रश्न गरे। आफ्ना अभिभावक पनि छिर्न नपाउने होस्टेलमा एक्कासी प्रहरी किन छिर्‍यो भनेर प्रश्न गरे।
स्याङ्तानलाई छोड्न नत्र आफुहरूलाई पनि समात्न प्रहरीलाई चुनौती दिए। कलेजले आफूहरूलाई तर्साउन प्रहरीसँग मिलेर स्याङ्तानलाई पक्रन लगाएको विद्यार्थीहरूको आरोप छ।
कलेज सञ्चालक हरिशचन्द्र न्यौपानेले आफूले स्याङ्तानलाई पक्रन लगाएको सत्य नभएको दाबी गर्छन्।
‘मान्छे विभिन्न आरोप लगाउँछन्, उनलाई प्रहरीले समातेको मैले भोलिपल्ट मात्र थाहा पाएको हुँ,’ उनले भने।
विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँगको संलग्नताका कारण स्याङ्तानलाई समातेको जानकारी दिएको न्यौपानेले बताए।
प्रहरीले प्रवीणलाई योभन्दा अगाडि पनि दुई पटक पक्राउ गरेको थियो। तर उनले विप्लवको संगठनको कुनै पनि जिम्मेवारीमा आफू नरहेको भनेर कागज गरेपछि छाडेको थियो।
नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा चितवनमा बिडीएस पढिरहेका उनी विप्लवका समर्थक भने स्कुल पढ्दादेखि नै हुन्। प्रकाश चन्दसँग उनी धेरै नै निकट छन्।
प्रवीणलाई प्रहरीले भदौ १७ गते राति छाड्यो। विप्लवसँगको संलग्नताका कारण समातेको भए सायद भोलिपल्ट नै उनलाई छाड्ने थिएन।
भदौ १८ गते विद्यार्थीले आफ्ना माग पूरा हुनुपर्ने बताउँदै कलेज र अस्पताल प्रशासनमा ताला लगाए। त्यही साँझ प्रहरी आएर ताला तोड्यो।
भदौ १९ गते प्रहरीले ताला तोडेको विषयमा विद्यार्थीले अस्पतालमा प्रदर्शन गरे। प्रहरीले हस्तक्षेप गर्‍यो, लाठीचार्ज भयो। छ जना विद्यार्थी घाइते भए।
आन्दोलन चर्किँदै गएपछि कलेज प्रशासनले विद्यार्थीलाई आफ्नै अस्पताल छिर्न रोक लगायो।
भदौ २५ गते विद्यार्थीले अस्पतालअगाडि प्रदर्शन गरे। अस्पताल छिर्न प्रयास गरे। प्रहरीले ‘सुरक्षा साङ्लो’ बनाएर विद्यार्थीलाई भित्र पस्न रोक्न खोज्यो। प्रहरी थोरै थिए, विद्यार्थी धेरै। घम्साघम्सी भएपछि प्रहरीले लाठी चार्ज गर्‍यो।
प्रहरीले टाउकोमा हानेको लाठीले विद्यार्थी रूपक मेहता त्यहीँ ढलेर बेहोस भए। विद्यार्थीको भागाभग भयो। प्रहरीले कतिपय छात्राको कपालमै समातेर तान्यो। एकजनाको कपडा च्यातियो। प्रहरीले मुख छाडेर गाली गरेको विद्यार्थीले बताए। त्यो दिन १६ जना विद्यार्थी गिरफ्तार भए। त्यहीँ साँझ रिहा भए।
‘प्रहरीले हामीलाई आतंककारीका साथीसम्म भन्यो,’ नर्सिङकी एक विद्यार्थीले भनिन्।
भदौ २६मा चितवन जिल्ला प्रहरीले विद्यार्थी र कलेज प्रशासनलाई प्रहरी कार्यालयमा बोलायो।
कलेजका तर्फबाट सिइओ प्रताप देवकोटा र प्रशासक अरूण कोइराला प्रहरी कार्यालय गए। आन्दोलनरत थुप्रै विद्यार्थी प्रहरी कार्यालय पुगे।
डिएसपी सालिग्राम शर्मा र अर्का डिएसपी उपस्थित थिए।
छलफलको सुरूमै डिएसपी शर्माले प्रहरी कार्यालय भनेको मर्यादित ठाउँ हो, यहाँ सबैले सम्हालिएर कुरा गरौं भने।
विद्यार्थीले तुरून्तै जवाफ फर्काए, ‘कलेज, अस्पताल झनै मर्यादित ठाउँ हो। त्यहाँ हामीलाई अस्ति प्रहरीले किन मुख छाड्यो? किन लछारपछार पार्‍यो? किन लाठी बजार्‍यो?’
विद्यार्थीहरूका अनुसार डिएसपी शर्माले भने, ‘लाठीमात्र होइन, अर्को पटक गोली पनि चल्न सक्छ।’
प्रकाश चन्दले विद्यार्थीहरूको आन्दोलनको वार्ता प्रहरी कार्यलयमा हुन नसक्ने तर्क उक्त छलफलमा राखे।
‘हामीलाई कम्तिमा सिडिओ कार्यालयमा बोलाइएला भन्ने थियो,’ चन्दले त्यहाँ भने।
छलफल कुनै खास विषयमा प्रवेश नै नगरी टुंगियो।
त्यसको भोलिपल्ट कलेज प्रशासनले सुरक्षाको कारण देखाउँदै कलेज बन्द भएको सूचना जारी गर्‍यो। होस्टेल पनि खाली गर्न भन्यो।
विद्यार्थीले भने आफ्ना माग पूरा गरेर कलेज पुन: सञ्चालन हुनु पर्ने माग गर्दै आन्दोलन जारी राखेका छन्। कलेज सञ्चालक हरिसचन्द्र न्यौपानेले आफूहरूसँग वार्ता गरेर समाधान गर्नु पर्ने माग विद्यार्थीहरूको छ।
सञ्चालक न्यौपानेले भने आन्दोलन सुरू भएदेखि नै विद्यार्थीहरूसँग वार्ता गरेका छैनन्। उनी केही दिनदेखि काठमाडौंमा छन्।
कलेज प्रशासनले भने अभिभावकलाई फोन गरेर ‘ब्ल्याकमेल’ गर्ने गरेको विद्यार्थीले बताए।
‘तपाईंका छोराछोरीले आन्दोलनमा लागेर आफ्नो भविष्य बिगार्दै छन् भनेर कलेजले हाम्रा बाआमालाई फोन गर्ने गरेको छ,’ विद्यार्थीहरूले भने।
प्रकाश चन्द आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा भएको कुरालाई कलेजले नराम्रोसँग प्रचारप्रसार गर्न खोजेको र मिडियाले पनि कुरा नबुझी लेखेको विद्यार्थीहरूको आरोप छ।
आइतबार अस्पतालअघि भएको कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै एकजना विद्यार्थीले भनिन्, ‘प्रकाश चन्द विप्लवका छोरा भनेरमात्र मिडियाले लेख्छ। उनी यहाँका मेडिकल विद्यार्थी हुन्, र यहाँको बेथितिबारे संघर्ष गरिरहेको छ भनेर मिडियाले किन लेख्दैन?’
विद्यार्थी अस्फाक खानले मिडिया पनि बिकीसकेको आरोप लगाए।
सेतोपाटीले समूहमा कुरा गरेका चितवन मेडिकल कलेजका १८ जना विद्यार्थीले आफूहरूलाई राजनीतिसँग कुनै लेनदेन नभएको र आफ्नो हकहितका लागि विद्यार्थीहरू एकजुट भएको बताए। उनीहरूका परिवारको आस्था फरक-फरक पार्टीमा रहेको पनि उनीहरूले बताए।
आफूहरूले अवैधानिक शुल्क तिर्दैनौं भनेर आन्दोलन गर्दा कलेज प्रशासनका मानिसले ‘नेता’ भनेर खिसिटिउरी गर्ने गरेको विद्यार्थी भावना तिवारीले बताइन्।
‘मैले त सबैलाई भन्ने गरेकी छु मलाई नेता नभन्नुस्,’ उनले भनिन् ‘अहिले नेपालमा सबैभन्दा कम सम्मान गर्ने शब्द नै नेता हो।’
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ ३०, २०७६, २२:१५:००